Nagarik News - मौन कांग्रेस
नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा नेपाली कांग्रेसले आफू सत्ताको नयाँ समीकरणमा नअट्ने र पछाडि धकेलिने संकेत पाइसकेको घटनाक्रमले प्रस्ट्याएका छन्। संविधान जारी गर्ने मिति केही समय पछि सार्ने कांग्रेसको इच्छा पूरा हुन सकेको थिएन। त्यसले उसको आकलनलाई बल पुर्‍याएको हुनुपर्छ। मधेश आन्दोलनको तीव्रता र भारतीय नाकाबन्दीको चुनौतीलाई त्यत्तिकै तीव्रताका साथ सामना गर्न तयार रहेर भए पनि तोकिएकै मिति (गत वर्षको असोज ३ गते) मा संविधान जारी गर्ने एमाले नेतृत्व र त्यसका समर्थकहरूको दृढताका सामु कांग्रेस पछाडि परिसकेको थियो। परिणाम वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको छ। समीकरण अद्यापि कांग्रेसअनुकूल छैन।
वर्तमान संविधानप्रति कांग्रेसको व्यवहारतः आलोचनात्मक समर्थन जगजाहेर भएको छ। २०४७ सालको संविधानप्रति एमालेको र वर्तमान संविधानप्रति राप्रपा नेपालको घोषित आलोचनात्मक समर्थन यसले स्मरण गराउँछ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी गरेको तथ्य यो सन्दर्भमा गौण हुन पुगेको छ। कांग्रेसको व्यवहारबाट वास्तविकता प्रस्ट हुन्छ, वर्तमान संविधानको स्वामित्व एमाले र एमाओवादीले पूर्ण रूपमा लिएका छन्। मधेशवादी अधिकांश दल असन्तुष्ट छन्, कांग्रेस मध्यमार्गमा छ र एमाले, एमाओवादी लगायतका दलमा नयाँ संविधानबाट अतिरिक्त उत्साह जागृत भएको छ। नेपाली कांग्रेसको पहलमा संविधानमा तत्काल संशोधन पनि भयो, तथापि परिस्थिति फेरिएको छैन।
मधेशवादी दल र भारतको असन्तुष्टि अनि हाम्रा सत्तासीन घटकहरूको सन्तुष्टिका बीच प्रमुख विपक्षी एवं संसद्को सर्वाधिक ठूलो पार्टी कांग्रेसको आवाज मधुरो सुनिन्छ। जति नै मधुरो भए पनि त्यो अस्पष्ट भने छैन र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा देशमा संकट थपिन सक्छ। संविधान जारी हुनासाथ कांग्रेस सत्ताबाट पूर्णतया विमुख हुन पुग्नु संयोग मात्र मान्न सकिन्न। यसबीच विपक्षीको भूमिकामा सन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति कांग्रेसका नेताहरूबाट बारम्बार प्रकट हुनु पनि अर्थपूर्ण छ। कांग्रेसका नेताहरू मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीमा लगभग मौन रहे। सो पार्टीको भूमिका पनि मौनतामै गुजि्रयो भने हुन्छ। संविधान जारी भएपछि कांग्रेसको समर्थनमा उत्रिएका मधेशवादी दल कांग्रेससँगै परास्त मानिए र नाका एवं सडकमा आन्दोलित रहिरहे। कांग्रेसले मानौँ, यो सब ...तमाशे' बनेर हेरिरह्यो।
यसबीच कांग्रेसका एक जना नयाँ प्रभावशाली नेता कोइरालाले प्रस्ट्याइ पनि दिए। उनको कथन थियो, ...प्रजातन्त्रको मुहान मधेशमा असन्तुष्टि छ।' कांग्रेसको राष्ट्रवाद एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, जनमोर्चा नेपाल लगायतका सत्तासीन दलहरू जत्तिको तीक्ष्ण रहेन, रहेको छैन। देशमा व्याप्त राष्ट्रवादी लहरमा कांग्रेस उभिन सकेको छैन। उसको मौनता कतिपय राष्ट्रवादीको नजरमा सन्दिग्ध बनेको छ वा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु नै श्रेयस्कर ठानिएको छ। यसले समस्या समाधान हुने सोच ...सुतुरमुर्ग' प्रवृत्ति सावित हुनसक्छ। तर, स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, सरकारका घटक र समर्थक जमातको राष्ट्रवादी आवाजमा नथप्नु कांग्रेसको अकर्मण्यता हो? कांग्रेसका मुख्य नेताहरू बोलिरहेका नै सुनिन्छन्, तर यस प्रश्नमा उनीहरू मुखर हुन चाहँदैनन्।
कांग्रेसले मौनता र तटस्थता रुचाएको देखिन्छ, तथापि कांग्रेसलाई निष्त्रि्कय त पक्कै मान्न सकिन्न। सरकारको राष्ट्रवादी अडानका प्रशंसकहरूबीच कांग्रेस परास्त भइसकेको मान्न सकिन्छ। एक वा अर्को कित्तामा धु्रवीकरण खोजिरहेको जमातबीच कांग्रेस अप्रासंगिक बन्दै छ। यी सब तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिन्न, तर कांग्रेसले यस्तो भूमिका जानाजान रोजेको, खोजेको अनि चाहेको, रुचाएको होइन भन्ने आधार के?
कांग्रेस वर्तमान सत्तासीन दलहरू र आन्दोलित मधेशवादी दलको मध्यमा छ, अझ भारतको नाकाबन्दी र ओलीको प्रचण्ड राष्ट्रवादको पनि बीचमा रहेको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। उसकै व्यवहारले प्रकट गरेको तथ्य हो यो। मधेशवादी दल र भारतसँग कांग्रेसले जुहारी खेलेको छैन। बरु दक्षिण छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको मधेशलाई प्रस्टतापूर्वक प्रजातन्त्रको मुहान भनेको छ। विपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले समस्या समाधानमा थप भूमिका निर्वाह नगर्नु दुःखद पक्ष हो। तर, यथार्थ यस्तै कटु छ।
अपेक्षा के गरिएको छ भने मधेशमा प्रदेश विभाजन र सीमांकन अनि चरम भारतीय असन्तुष्टि जस्ता समस्यासँग कांग्रेसले विपक्षमा रहेरै पनि सामना गर्नुपर्छ। यस्तो राष्ट्रिय समस्यामा कांग्रेसले उदासीन भाव प्रकट गरेको भान जनतामा पर्नु अशोभनीय हुनेछ। सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको कांग्रेसको सशक्तता ज्वलन्त समस्याको सामना र समाधान गरेरै पुष्टि हुनेछ। वर्तमान सरकारमा सामेल हुन कांग्रेस अस्वीकार गरिरहेको छ। उसको तर्क, लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष चाहिन्छ। संकटको घडीमा प्रतिपक्ष होइन, राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने कांग्रेसले बिर्सेको हो? देश बाहिरबाट लागेको नाकाबन्दी र देशभित्र संरक्षित र प्रोत्साहित कालोबजारी संकटका चिन्ह हुन्। यस्तो बेला कांग्रेसले सरकार आफ्नै विरोधाभासले ढल्ने र आफूले त्यसपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्ष राख्नु कति जायज होला?
प्रश्नहरू अनगिन्ती होलान्। सबै प्रश्नको जवाफ एकैपटक सम्भव नभए पनि अन्ततः कांग्रेसले तटस्थता र मौनता त्यागेर मुखर त बन्नैपर्छ।
कथाकार ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन : श्याम साह, कथाकार
पत्रपत्रिकामा फाट्टफुट्ट कथा लेखेर झुल्किएका श्याम साह अहिले नयाँ कथासंग्रह 'अब्बा' लिएर आएका छन्। 'अब्बा'ले मधेसको राजनीति र त्यस क्षेत्रको मनोविज्ञान समेटेको छ। साहसँग कथालेखनमा केन्द्रित भएर दीपक सापकोटाले गरेको...